Jaappaan - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 10:05 29 Hagayya 202110:05 29 Hagayya 2021
Atileetii Itoophiyaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf warqii fidde kana beektuu?
Guyyaa sambataa seenaa Paaraalimpikii keessatti Itoophiyaan yeroo jalqabaaf atileet Tigist Gazzaahany Mangistuudhaan medaaliyaa warqii argatteetti. Waa'ee atileetii seenaa Abbabaa Biqilaa qooddatte kanaa maal beekna?
...tti maxxanfame 6:28 24 Hagayya 20216:28 24 Hagayya 2021
'Yoon danda’e warqii kanaan achi sadan keessaa tokkoon fida' - Atileetii Paaraalimpikii
Sagantaan baniinsaa Paaraalimpikii Tookiyoo gaafa Kibxataa ifatti eegala. Dorgommiin immoo Roobii eegalee guyyoota 12’f taasifama.
...tti maxxanfame 11:50 22 Hagayya 202111:50 22 Hagayya 2021
Gabatee medaaliyaa Paaraalimpikii Tookiyoo 2020
Biyya kamtu gabatee medaaliyaa PaaraalimpikiiTookiyoo 2020’n sadarkaa olaanaarra teesse?
...tti maxxanfame 4:40 13 Hagayya 20214:40 13 Hagayya 2021
Koreen Olompikii Tookiyoo meedaaliyaa kantiibaan ciniine haaraan bakka buusuuf
Dorgommii softball athlete jedhamuun meedaaliyaa warqii kan argatte Miyuu Gootoo, kantiibaan magaalaashee meedaaliyaashee ilkaaniin waan ciniineef kan biraan kennamuufiif jedha.